China ECommerce kuzadzikisa sevhisi uye mumiririri | Sunson
tora & kurongedza kuzadzikiswa
Pasi rese sevhisi yekutakura
Tevera pasuru yako
Kubatanidzwa kwe API
Ndeapi masevhisi ekuzadzikisa?
Sevhisi yekuzadzisa ndeye yechitatu-bato imba yekuchengetera iyo inogadzirira uye inotumira maodha ako kwauri. Inoita izvi kubva munzvimbo yayo yekuzadzikisa. Ecommerce kuzadzikisa masevhisi akakosha kumabhizinesi ayo asingade kubata nekutakura kana kunge akura zviripo zvekuchengetedza dzimba kusvika padanho ravanotadza kutumira maodha ivo pachavo.
1.Sunson API inoita kuti iwe ubatanidze mawebhusaiti ako uye uwiriranise data.
2.Kubatanidzwa nesystem yedu kubatsira kugadzirisa uye kugadzirisa kuzadzikiswa kwako.
3.WMS (Warehouse Management System) inogadzirirwa chaiyo-nguva yekutarisa uye kugona kwepamusoro.
Global eCommerce Kuzadzikiswa
Yambuka-muganho eCommerce inogonesa akawanda epasirese vatengi vanogona kuwana zvitoro zvako nekutenga zvinhu. Basa rako rinonyanya kukosha nderekudyara mukushambadzira kuti uwedzere bhizinesi rako reCommerce. Basa redu kudzikisa mutoro wekuzadzisa iwe, kuzadzisa uye kutumira zvinhu zvako pasuo remutengi wako.
Zvese-zvinosanganisa Kuzadzikiswa Solution yeCommerce
Ese eCommerce kuzadzikisa masevhisi aunoda, sekuchengetedza, kunhonga, kurongedza, uye kutumira, zvinogona kuitwa muSunsonexpress. Mushure memakore ekugadzirisa, isu takarerutsa uye nekugadzirisa maitiro ekuzadzikisa. Naizvozvo, iwe unongoda kuita mashandiro akareruka, uye yedu otomatiki yekuzadzikisa system inobata zvese zvasara.
Ecommerce Kuzadzikisa Solution inosanganisira:
Kuchengetedza kwemahara kwemazuva makumi mapfumbamwe
Branding uye yakagadzirirwa kurongedza
Gadza mitemo yekutakura otomatiki
Wongorora chaiyo-nguva yemitengo uye gadzirisa mabhiri
yekutevera info ichaendeswa otomatiki kune vatengi
Nyore Batanidza Yako Online Zvitoro
Kubatanidza zvitoro zvako zvepamhepo ne Sunsonexpress inobvumira maodha kuti aenzaniswe otomatiki kune yedu system uye isu tichazadzisa nekuvatumira kunze kwedu China imba yekuchengetera kune ako epasi rese vatengi. Uye nhamba dzekutsvagisa dzinozovandudzwa kuzvitoro patino mamaka iwo maodhi sekuzadziswa.
Tinogona kusanganisa zvakananga neakawanda eCommerce chitoro mapuratifomu uye hapana muganho kune huwandu hwezvitoro zvaunogona kubatanidza mukati meimwe yekuzadzikisa account.
Yakagadzirwa muChina? Wobva Wachengeta muChina uye Chikepe Kubva kuChina!
Sunsonexpress eCommerce Order Fulfillment Service yakanakira vatengesi vepamhepo vanogadzira zvigadzirwa zvavo kubva kuChina kana vari kutengesa zvakagadzirwa muChina zvigadzirwa.
Imba yedu yekuchengetera iri muShenzhen, China, iri padyo nevagadziri vako. Izvi zvinoreva kuti mutengo wekuchengetedza uye wekuzadzisa wakaderera zvakanyanya uye nguva yekugovera ipfupi.
Kwete izvozvo chete, isu tinopawo kukosha-kuwedzera masevhisi ekumaka kumusoro kana kugadzirisa mhando yekuzadzikisa sevhisi, senge: kunhonga-kubva kufekitori, kwakazara zita uye kurongedza kwetsika.
Akawanda eCommerce Logistic Services
Yedu logistics mhinduro inovhara mazana maviri nemakumi maviri enyika uye matunhu kutenderera pasirese kuburikidza nepositi masevhisi, akakosha mitsara, uye kuratidza kutakura. Kubva kuCommerce kuzadzikiswa kune kutengeswa kwekutengesa, isu takazvipira kuita kuti kutumira kwepasirese kuve nyore kwauri. Kuomarara kwekufambisa uye nyaya dzekuregedza tsika dzinozogadziriswa nesu. Yedu DDP uye DDU masevhisi zvakare anofanirwa-kuve nawo kune mazhinji eCommerce vatengesi.
Ecommerce Kuzadzikiswa China
Ecommerce Kuzadzikisa Sevhisi
Ecommerce Kuzadzikiswa Warehouse
Ecommerce Raira Kuzadzikiswa
Ecommerce Order Kuzadzikiswa Maitiro
Warehouse Ecommerce Kuzadzikiswa
Kero: C102 Nha. 4 xiaolong mugwagwa tongsheng nharaunda dalang mumugwagwa longhua dunhu shenzhen guta guangdong